मुख्यमन्त्री शाहीले किन गरे प्रदेश अस्पताल अनुगमन ? – Nepalpostkhabar
मुख्यमन्त्री शाहीले किन गरे प्रदेश अस्पताल अनुगमन ?
नेपालपाष्ट खबर । १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०७:०६ मा प्रकाशित
कर्णाली ः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश अस्पतालको छड्के अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार साँझ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अनुगमन गर्नुभएको हो । कर्णालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा आठ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि उहाँले अस्पताल पुगेर बिरामीहरूको उपचार अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिमला केसीसहित अस्पताल पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना सङ्क्रमितहरू रहेको आइसोलेशन वार्डको निरीक्षण गर्नुभयो । अस्पतालको सेवा तथा बिरामीहरूको अवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा उहाँले अस्पताल निर्देशक डा डम्बर खड्का र कोरोना सम्पर्क व्यक्ति डा केएन पौडेलसँग उपचार सेवा प्रभावबारे जानकारी लिनुभयो ।
अनुगमनपश्चात अस्पतालका निर्देशक डा खड्कासहित चिकित्सकहरूलाई उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो । कोभिड उपचारका लागि अग्रभागमा रही सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूका गुनासो एवं समस्याबारे पनि उहाँले जानकारी लिनुभएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले शुक्रबार बेलुका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १० सुर्खेतका ३२ वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको जनाएको छ । योसँगै कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४८ पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा २५३ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । योसँगै सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ९ हजार ३४७ पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।